Iyo Apple Watch Series 3 isinganzwisisike kutangazve muzvipatara | Ndinobva mac
Kwete, haisi jee mune yakashata kuravira, Zvita 28 yapfuura. Izvi ndezvechokwadi. Vatengi vazhinji vakazivisa kadhi risingazivikanwe mune yazvino Apple Watch Series 3 mamodheru. Sekureva kwavo, zvishandiso zvavo zvinovhurwa zvega zvega munzvimbo dzehutano, senge zvipatara nenzvimbo dzehutano.
Vazhinji vevashandisi vakakanganiswa vashandi munzvimbo idzi, uye ita shuwa kuti vanoona wachi yavo ichigadzirisa rese kazhinji, kushandura ruzivo rwako rwekushandisa neApple Watch kuita gehena chairo. Asi nei izvi zviri kuitika, uye nei chete neyechangobva kuitika modhi yakaburitswa nekambani?
Zvakanaka, hatisati taziva. Kunze kwemamiriro echipatara, wachi haina zviratidzo zvakadaro. Naizvozvo, tinogona kuve nechokwadi icho Iko kutadza kwakatorwa kubva kune chimwe chinhu chakakonzerwa nerudzi urwu lwenzvimbo.
Imwe mhando yekukanganisa inokonzerwa neimwe mhando yezvokurapa inofungidzirwa, pamwe kubva kune imwe padyo uye yakajairika michina muzvipatara, iyo yedu Apple Watch Series 3 inotangazve nekudzokorora, yega maminetsi makumi matatu kusvika makumi mapfumbamwe anenge.
Dambudziko iri, iro rakatanga kutaurwa pakutanga kwaZvita wegore rapfuura, rinoitika nekuwedzera huwandu uye nenhamba huru yevatengi, saka Apple iri kuongorora chingave chiri chikonzero chayo. Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakasarudza kuchinjanisa icho chinonzi chakakuvara chigadzirwa kune vamwe vevatengi vakakanganiswa neiyo nyowani nyowani, asi dambudziko richiripo.
Kubva kumahofisi eApple, zvinotarisirwa kuti iyo bug inogona kugadziriswa neiyo diki software yekuvandudzaAsi kusvika parizvino hazvizivikanwe kana izvi zvichizogoneka. Iri kuda kuziva asi, parizvino, "mhinduro" chete iyo vashandisi vezvinhu zvakakanganiswa zvavakawana kubva kukambani yekuNorth America ndeyekushandisa wachi yavo munzira yendege, ivo vachiri kugara munzvimbo dzehutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 3 zvisinganzwisisike kutangazve muzvipatara
IMac Pro zvishongedzo zviripo pa eBay nemitengo isina musoro
Apple yakagadzirisa software padenga reApple Chitoro muChicago